Tonga ny ririnina! Tokony hividy kojakoja fandroana thermietika ve aho? Henoy Ireo manam-pahaizana, tsy mahagaga raha maro ny olona te hiova !!!
Home / Blog / Tonga ny ririnina! Tokony hividy kojakoja fandroana thermietika ve aho? Henoy Ireo manam-pahaizana, tsy mahagaga raha maro ny olona te hiova !!!
2021 / 01 / 15 FisokajianaBlog 6470 0
Sekoly fandraharahana amin'ny trano fidiovana 2020-11-19
Raha miresaka ireo lavaka sendra ny fandroana hatramin'ny fahazazany ka hatramin'ny olon-dehibe dia mampalahelo ny milaza bebe kokoa.
Tao amin'ny fandroana dia hita fa tsy misy rano mafana!
Na izany na tsy izany, ny fanontaniana farany dia: Fa maninona no sarotra be ny mandro tsara?
Raha lazaina fa tsotra ny fandroana, raha ny tena izy, tsotra ao anatin'izany ny tsorakazo, faucet, nozela mizara ho famafazana ambony sy famafazana tanana.
Saingy hoy ny olona sasany, nandany folo yuan aho hividianana fampiasana tena tsara. Vaky ny fandroana, ary avy eo manolo fandroana vaovao, ary tsy maninona ianao. Raha mbola afaka manasa azy madio ianao.
Ka tsy misy tsy mety, fa ny fanandramana amin'ny farany tsy mitovy.
Toy ny, mofo 50 steamed XNUMX cents, afaka mihinana ampy ianao, yuan an'ny Michelin an'arivony koa dia mihinana ampy. Samy feno, iza no tianao hohanina?
Ny fanalahidy dia tsy amin'ny valiny, fa amin'ny fahafinaretana amin'ny fizotrany. Androany isika hiresaka momba ny fandroana ~
Iray. Karazan'ireo fandroahana orana
Amin'ny ankapobeny, misy karazana showerhead roa lehibe eny an-tsena ankehitriny: thermostatic and normal. Amin'ny fividianana olona matetika matetika dia tsy fantatrao na misafidy fandroana thermostatic na fandroana mahazatra izy ireo. Inona no mahasamihafa azy roa?
Orana mahazatra, ny fotony dia koveta vita amin'ny seramika amin'ny alàlan'ny fihodinana mba hanamboarana ny mari-pana amin'ny rano, mihodina sy midina mba hifehezana ny fikorianan'ny rano. Tena mety sy haingana ampiasaina izy io.
Fa matetika mampiasa ny fandroana dia hahita olana, amin'ny ririnina mandro dia sarotra ny mifehy ny mari-pana amin'ny rano amin'ny mari-pana sasany. Izany dia satria ny faucet fandroana mahazatra dia ny mampifangaro rano mangatsiaka sy rano mafana hanitsiana ny hafanan'ny rano. Raha vantany vao niova ny tsindry rano avy amin'ny rano mafana na mangatsiaka dia ho lasa tsy milamina sy mafana ary mangatsiaka ny hafanan'ny rano.
Ary ny fandroana thermostatic nohavaozina, ny spool dia azo ahitsy amin'ny faucet miaraka amin'ny termostat azy manokana. Mandanjalanja mandeha ho azy ny tsindry rano mangatsiaka sy mafana, mba hitazomana ny fiorenan'ny hafanan'ny rano.
Raha ny fijery azo antoka dia sarotra ny mifehy ny mari-pana mahazatra. Mandro tsara ny olon-dehibe, afaka mamaly ara-potoana. Raha ny be antitra na ny ankizy no mandro dia mora ny manarona azy vokatr'izany.
Ny fandroana thermostatic dia azo apetraka amin'ny maripana amin'ny fandanjana mandeha ho azy, amin'izay hampihena ny vintana mety hiparitaka. Ary ny rindrina anatiny ao anaty faucet koa dia nanao fitsaboana fanoherana ny aretin-koditra. Na mikasika ny faucet aza tsy nahy ianao, dia tsy ho voadaroka, manatsara ny fiarovana ny fandroana.
Ho fanampin'izany, ny fandroana dia azo zaraina ho fandroana tànana koa, fandroana famafazana ambony ary famafazana famafazana amin'ny lafiny fampiasana.
Ny ranonorana mivatravatra no be mpampiasa sy be mpampiasa indrindra. Ny fianakaviana ankapobeny dia nilaza fa ny fandroana, matetika dia manondro ilay fandroana tànana. Mora ampiasaina io fandroana io, afaka manasa ny faritra rehetra amin'ny vatana, miaraka amin'ny seza raikitra, afaka manatratra ny fiasan'ilay fandroana famafazana ambony, mahomby.
Ankehitriny dia mihabetsaka ny trano no misy fandroana fandroana ambony. Ny haben'ity fandroana ity dia lehibe kokoa, mazàna dia mihoatra ny 8 santimetatra, ny halavany sy ny sakany dia mety mihoatra ny 1 metatra. Ny fandroana famafazana ambony dia mety hahatratra ny orana, ny zavona ary ny fivoahan'ny rano hafa, hany ka toy ny voajanahary ny mpampiasa, mahatsapa ny fiantsonana mivantana indrindra amin'ny rano.
Fanosotra amin'ny famafazana
Ny fandroana famafazana amin'ny sisiny dia mila apetaka amin'ny rindrina, manondraka rano amin'ny sisiny, lehibe kokoa ny fananana mpanampy, indrindra hahatratrarana ny asan'ny otra. Ny fandroana famafazana amin'ny lafiny sasany dia afaka manamboatra ny zoro hahatratra ambony sy ambany, havia sy havanana na tsy fanarahana rano tsy tapaka, azonao atao ny manasa sy manotra ny vatana iray manontolo. Ny fandroana famafazana amin'ny lafiny matetika dia tsy amidy misaraka, mazàna amidy amina ampahany amin'ny rafi-pisasa miafina na fandroana fandroana.
Faharoa, ny làlan'ny fivoahan'ny rano avy amin'ny shower
Araka ny anarany, ny rano voajanahary dia ny rano voafafy amin'ny fomba voajanahary indrindra, tsy misy fitsaboana. Ny famafazana avy ao anaty lavaka silika mandro, ny rano miaraka amina tsindry sasany, dia afaka manasa ny vatana iray manontolo, no fomba fampiasa indrindra amin'ny rano.
Rano mibontsina rivotra
Misy fitsangantsanganana an'habakabaka ao amin'ny lalan-drano ao anatin'ny fandroana. Ny fikorianan'ny rano haingam-pandeha dia manosika ny fikorianan'ny rivotra ary mifangaro hanangana tsanganana rano. Izy io dia mamadika ny rano famaohana tany am-boalohany ho rano mitete. Ny rano miboiboika dia feno sy malefaka. Rehefa avy mamakivaky ny vatana ny rano dia mitohy mipoaka ireo lava kely sisa tavela ao amin'ny vatana ka mitondra mangatsiaka be.
Ny rano fanorana dia rano mikitroka ao anaty lavaka fisotro. Ny lavaka fanorana dia misy rotor azo ahodina. Ny rotor dia entin'ny fiantraikan'ny fikorianan'ny rano ary mihodina amin'ny hafainganam-pandeha avo ao anaty ny fandroana, ka miteraka rano am-polony amin'ny fanapahana ny ampahany amin'ny rano mikoriana matetika. Ny kapoaky ny rano toy izany dia mikapoka ny vatana mba handray anjara amin'ny fanorana, izay antsoina hoe rano fanorana.
Ny rano famafazana dia satria ny lavaka famafazana eo amin'ny tontonana dia natao manokana. Ny rano mikoriana mamaky ny zavona dia miparitaka. Ny rano zavona dia manana faritra midadasika, ary ny maha-ao anaty zavona rano azy dia manome traikefa hafa ho an'ny mpandro.
Ny ankamaroany dia hita ao amin'ny loha fandroana any ambony, ny fotokevitra dia ny manova ny lavaka fivoahan'ny rano ho tsipika. Ny rano dia esorina amin'ny lavaka manify tany am-boalohany ho any amin'ny fivoahana. Mijoro eo ambanin'ny olona ny olona toy ny hoe ny riandrano voajanahary no midina anaty.
Ny orana sasany dia tsy afaka mifindra eo anelanelan'ny rano isan-karazany fotsiny, fa amin'ny fomba roa na maromaro amin'ny fotoana iray ihany. Ohatra, ny rano voajanahary misy rano manjavozavo no fomba mahazatra indrindra mampifangaro rano.
Fahatelo, ny kalitaon'ny shower
Rehefa mifidy fandroana dia tsy mila manao fitsapana rano fa amin'ny tanana sy tanana ihany. Ny toerana lehibe hijerena ireo voan-javamaniry vita amin'ny silika sy plating.
Rehefa mividy fandroana tànana dia tandremo manokana ny lavaka fivoahan'ny rano. Ny kalitaon'ny fivoahana dia mamaritra raha ny tsanganana rano nofafazana avy tao amin'ilay fandroana dia mifandanja, na misy ny hamafin'ny toe-javatra na tsia. Ny sakan-drano amin'ny fandroana amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny silicone. Ny lavaka famoahana rano madio dia milamina sy malama ary malefaka. Ity voan-tsolika ity dia tsy afaka miantoka ny kalitaon'ny fivoahan'ny rano, ary madio tsy misy fikarakarana.
Ny seam ny fandroana no hita taratra indrindra amin'ny "asa-tanana" an'io toerana io. Ny zaitra tsara dia tokony ho tery ary tokony ho kely ny banga, mba hisorohana tsara ny famoahana rano sy hiantohana ny kalitaon'ny vokatra.
Ny haavon'ny plating dia refin'ny faharetan'ny fandroana na tsia. Ny plating tsara dia malama, tsy misy marika tsara, ary tsy hanana fahatsapana mibontsina rehefa voakitika. Rehefa miantsena dia azonao atao ny mametraka ny fandroana ao ambanin'ny jiro ary manamarina azy tsara. Raha mahita ratra na tsy fitoviana ianao dia hihena be koa ny ain'ny serivisy amin'ity fandroana ity.
Fahefatra, ny fahaiza-mifidy ny shower
Jerevo ny vokan'ny tsifotra
Avy ety ivelany, ny endrik'ilay fandroana dia toa mitovy. Safidy iray dia tsy maintsy mijery ny vokariny, ny fandroana tsara dia afaka manome antoka fa ny lavaka famafazana kely dia mamafy sy mifanaraka. Amin'ny tsindry rano isan-karazany dia afaka miantoka effet shower tsara izy. Rehefa misafidy dia azonao atao ny mizaha ny rano mba hahitana raha toa ka mitovy ny jet jet.
Jereo ny fomba famafazana
Ny famolavolana anatiny ny loha fandroana dia samy hafa ihany koa. Amin'ny fisafidianana fandroana tànana, ankoatry ny vokany famafazana, ny fomba famafazana fandroana tanana dia manana fisondrotana, fanorana ihany koa. Ny fomba famafazana ankapobeny dia mety hitondra fahafinaretana tsara kokoa amin'ny fandroana. Ny fandroana tànana dia azo voafantina arakaraka ny toetran'ny fomba famafazana sahaza: karazana orana voajanahary sy mahafinaritra, karazana fanorana mahery vaika, karazana famafazana mafana sy mafana, karazana tsanganana malefaka sy malefaka, fitehirizana rano amin'ny karazana mitete.
Jereo ny Core Valve Ceramic
Ny valan-tsavony dia misy fiantraikany amin'ny fampiasana ny fahatsapana ny fandroana sy ny fiainam-panompoana. Ny fandroana tsara dia mampiasa spaonjy seramika, malefaka ary tsy misy fikorontanana. Amin'ny fisafidianana ny tanana dia afaka manodinkodina ny switch, mahazo aina, milamina mba hahazoana antoka fa ny vokatra ampiasaina mba hitazonana fampisehoana malama sy azo antoka.
Topazo ny takelaka ambonin'ity
Ny plating amin'ny shower dia tsara na ratsy, ankoatry ny fiatraikany amin'ny kalitao sy ny fiainam-panompoana, fa misy akony koa amin'ny fahadiovana fanadiovana mahazatra. Ny fandroana dia matetika plating chrome. Ny plating tsara dia azo tazomina amin'ny hafanana 150C ° ambony mandritra ny adiny 1, tsy misy fery, tsy misy ketrona, tsy misy fikafika sy fitrandrahana. Ny fitsapana famaohana asidra asetika 24 ora dia tsy mandeha. Ao amin'ny fifantenana dia azo jerena amin'ny famirapiratany sy ny malama, ny fandroana mamirapiratra sy malefaka dia manondro plating mitovy, kalitao tsara kokoa.
Tonga ny ririnina, maika faingana haka andiana fandroana thermostatic, ao an-trano koa dia afaka manao SPA isan'andro!
Previous :: Mamolavola ny fandroana ao an-trano mba ho tsara tarehy ary hanana endrika tsara ao anaty fandroana isan'andro Next: Na dia latsaky ny 5 metatra toradroa aza ny trano fandroana, dia sarotra ny manasaraka ahy sy ny maina.
2021 / 01 / 11 7431